GMM 25 – Networks – Channel Myanmar
The Underclass Season 1 Complete ထိုင်းစီးရီးအသစ် လန်းလန်းလေး ကြည့်ရအောင်။ ကျောင်းသူလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေကြည့်ကြ။ အညွှန်းက ဒါပဲ။ အဲလို ရေးပြန်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူးလေ။ ဇာတ်လမ်းက ထိုင်း ကျောင်းသူသီးသန့် ဘော်ဒါကျောင်းတစ်ခုထဲမှာ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ အဲဒီကျောင်းက မြန်မာက ကျောင်းတွေလိုပါပဲ။ အမှတ်နဲ့ အတန်းခွဲထားပါတယ်။ အတော်ဆုံးတွေက အေ၊ အညံ့ဆုံးတွေက အက်ဖ် ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘော်ဒါဆိုတော့ အေတန်း နဲ့ ဘီတန်း အက်ဖ်တန်းတွေက ရိုးရိုးမခွဲဘဲ ရပိုင်ခွင့်တွေပါ ခွဲလာပါတယ်။ အဆောင်အကောင်း အညံ့တွေ၊ အစားအသောက်ကအစ အကုန် ခွဲထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အပြိုင်အဆိုင်တွေ ပြင်းထန်ပြီး ဖိအားတွေများကြတာပေါ့။ ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ အက်ဖ်တန်းက အပေအတေအဖွဲ့က ညဘက်တွေမှာ စူပါဟီးရိုးလို ရုပ်ဖျက်ပြီး တော်လှန်ကြတာပေါ့။ အဲဒီအဖွဲ့ထဲကို အေတန်းကနေ စာခိုးချလို့ အပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့ စာကြမ်းပိုးမရောက်လာပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့။ လူငယ်ဇာတ်လမ်း၊ ပညာရေးစနစ်မှားတွေကိုလှောင်ထားပြီး လှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ကြိုက်ကြမှာပါ။ File Size - 300mb Quality - web-dl 720p Subtitle - burmese (hardsub) Translator - Little Neo , Dolly . August . YK Encoder - Thit San ...
TMDb: 7.3/10 80.823 votes
The Underclass Season 1 Complete
Operation to Subdue the She Devil (2018) CM Fan ေတြ အတြက္ ယခု တဖန္ တင္ဆက္ေပးမွာကေတာ့ ထိုင္းဇတ္လမ္းတြဲ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Operation to Subdue the She Devil (2018) ျဖစ္ပါတယ္ ျမန္မာနာမည္ ေပးထားတာကေတာ့ ” ေမာင့္ ကို ျပဳစားတဲ့ စုန္းမ” ပါတဲ့ မၾကာေသးခင္က Facebook မွာ စုန္းမ ဆိုတဲ့ ထုိင္းတီဗီစီးရီး ထေရလာ ျမန္မာစာတန္းထိုး တစ္ခု Share မ်ားေနၾကၿပီး ထို စီးရီးကို CM မွာ တင္ေပးဖို႔ ဘာသာျပန္သူကို ပူဆာၾကတဲ့ အတြက္ Hein Thet Naing ႏွင့္ Kyi Nue Zin ႏွင့္ Nann Mwe Kham တို႔ က ဘာသာျပန္တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ ဇတ္လမ္းပံုစံေလးကေတာ့ ထုိင္းရုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းစု ရဲ႕ ရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦး မွာ သမီးေလး တစ္ေယာက္ ရွိၿပီး မိတဆိုးေလး မို႔ သူေဌးႀကီးမွာ သူ႔သမီးကို အင္မတန္ ခ်စ္ပါတယ္… ဒါေပမဲ့ သူေဌးႀကီးနား ကပ္ေနတဲ့ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးေဟာင္း ...
TMDb: 8.1/10 80.823 votes
Operation to Subdue the She Devil (2018)